I-Penthouse + ichibi eliphezu kophahla phakathi kweWat Phnom kunye ne-CBD
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguCecilia & Stephane
I-Penthouse ekwindawo eyimbali yekota yaseTshayina yasePhnom Penh, ilitye elikude nendawo ephawulekayo ye-Wat Phnom - i-pagoda yakudala, enika isixeko igama layo. Ukuhlala phakathi kweRiverside ebukekayo yakudala kunye ne-CBD entsha yovukelo yeyona ofisi inde/ihotele eneenkwenkwezi ezi-5. Umbono ovela kwi-terrace yethu ebanzi ikuxelela konke malunga nexesha elidlulileyo kunye nekamva lesixeko. Izixhobo ezisemgangathweni zaseNtshona, umhombiso wangaphakathi wesitayela se-retro, kunye ne-4 * 4m yephuli yophahla lwabucala ikunika amava awodwa.
-Ukuba kumgangatho ophezulu wendlu yevenkile ka-1950 embindini weKota yaseTshayina yesixeko, ifulethi lethu likhethekile: igumbi lokuhlala elibubanzi obuyi-12m elijongene ne-Wat Phnom, i-pogada ephawulekayo enomgangatho ukuya kwiifestile zesilingi, ithatha imbonakalo ye-panorama ye-skyline yesixeko. I-Terrace enomthunzi wezityalo, yeyona ndawo ilungileyo yokusela, ukubona ukungafani kobomi besitrato sendawo kunye neyona ofisi yanamhlanje ye-Phnom Penh / iinqaba zehotele ecaleni komnye.
-Ukukhanya okukhulu kwendalo kunye nokungena komoya okunqumlayo kwenza indawo ibe lula. Imigangatho emi-2 enamagumbi okulala ama-2 kwinqanaba ngalinye, iibhafu ezi-4 ezigcweleyo zinika ubumfihlo kwigumbi ngalinye.
-Sirenta amagumbi amabini eendwendwe phezulu njengamagumbi abucala ngokwesiqhelo. Yonke iflethi ifumaneka KUPHELA xa sisiya phesheya kolwandle.
-Ubumelwane budlamkile buneevenkile zalapha ekhaya kunye nemarike kumgama wokuhamba.
-Ivenkile ekumgangatho wezizwe ngezizwe kunye nembali eyimbali yeMarike esembindini ngaphakathi kwe-500m ububanzi.
-Imizuzu emi-5 ukuhamba usiya kwiindawo zokukhenketha zeWat Phnom park kunye nebala lokudlala, kunye nomlambo odumileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Cecilia & Stephane
Kuxhomekeke kucwangciso lwethu lokuhamba, ninokuba nendlu yonke kuni, okanye amagumbi ama-2 eendwendwe kwigumbi eliphezulu. Sifikeleleka ngomyalezo we-airbnb ngalo lonke ixesha. Ukuba sisedolophini ngexesha lokuhlala kwakho, siyakuvuyela ukusebenzisana njengoko uziva ukhululekile.
Kuxhomekeke kucwangciso lwethu lokuhamba, ninokuba nendlu yonke kuni, okanye amagumbi ama-2 eendwendwe kwigumbi eliphezulu. Sifikeleleka ngomyalezo we-airbnb ngalo lonke ixesha. Uk…